မျိုးစောင့်ဥပဒေတွေကို အမြန်ဆုံးပြဌာန်းပေးဖို့ အမျိုးဘာသာ သာသနာ စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ (အထက်မြန်မာပြည်) က မန္တလေးမြို့မှာ အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့က တောင်း ဆိုစဉ်
မျိုးစောင့်ဥပဒေတွေကို အမြန်ဆုံးပြဌာန်းပေးဖို့ အမျိုးဘာသာ သာသနာ စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ (အထက်မြန်မာပြည်)က သံဃာတော်တွေ၊ သီလရှင်တွေနဲ့ စစ်ကိုင်းနဲ့ မိတ္ထီလာမြို့က အမျိုးဘာသာ သာသနာစောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့ဝင်တချို့က ဒီကနေ့ မန္တလေးမြို့မှာ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ မျိုးစောင့်ဥပဒေတွေကို အမြန်ဆုံးပြဌာန်းပေးဖို့ တောင်း ဆိုကြောင်း ဆန္ဒပြပွဲအပြီး အိမ်တော်ရာဘုရားမှာ ကြေ ညာချက်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာ မျိုးစောင့်ဥပဒေတွေ ပြဌာန်းဖို့ ကန့်ကွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ အနေနဲ့ အမျိုးဘာသာ သာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ (အထက်မြန်မာပြည်)နဲ့ လာရောက်ဆွေးနွေးဖို့ ပါဝင်ကြောင်း ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင် ဆရာတော်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဥူးယသက မိန့်ပါတယ်။
"မြန်မာတိုင်းရင်းသားတရပ်လုံး အားလုံးအတွက် အလွန်အရေးကြီးသော မျိုးစောင့်ဥပဒေကို လက်ရှိအစိုးရအဖွဲ့နှင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ပြည့်သူ့လွှတ်တော် အမျိုးသားလွှတ်တော်တို့ရှိ ဥပဒေပြု အမတ်များအနေဖြင့် အမြန်ဆုံးပြဌါန်းပေးကြပါရန် တောင်းဆိုလိုက်သည်၊ ကန့်ကွက်ရှှုံ့ချနေသော မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမဆို မျိုးစောင့်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကန့်ကွက်ရှုံ့ချနေသူ မည်သူမဆို အမျိုးဘာသာ သာသနာ စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ အထက်မြန်မာပြည် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးနဲ့ အချိန်မရွေး လာရောက် ဆွေးနွေးနိုင်ကြောင်း ကြေညာလိုက်သည်"
ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်နေ့ကလည်း အမျိုးဘာသာ သာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့နဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ ကြီး မြို့နယ်ပေါင်း ၂၈ မြို့နယ်က သံဃာအပါး ၁၀၀ ခန့်က ရန်ကုန်မြို့ ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်မှာ မျိုးစောင့် ဥပဒေတွေ ပြဌာန်းနိုင်ဖို့ ဆုတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။
အမျိုးဘာသာ သာသနာ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး (ဗဟို) ဥက္ကဌ ဘဒ္ဒန္တတိလောကာဘိဝံသက ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာ ကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ၊ လူဦးရေတိုးပွားနှုန်း ထိန်းညှိခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ၊ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ တစ်လင်တစ်မယားစနစ် ကျင့်သုံးခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေစတဲ့ မျိုးစောင့်ဥပဒေတွေကို ပြဌာန်းပေး ဖို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတထံ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင် ၉ ရက်နေ့က စာရေးသားတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီတောင်းဆိုမှုအပေါ် နိုင်ငံတော်သမ္မတက အဖွဲ့ဝင် ၁၂ဦးပါတဲ့ မျိုးစောင့်ဥပဒေရေးဆွဲရေး ကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
အမျိုးဘာသာ သာသနာအတွက် လုံခြုံစိတ်ချနိုင်ပြီလို့ ဦးဝီရသူ မိန့်ကြား
Amyo ko bel lo saint hmar tone Mandalay ta myo lone tayoat twe phyit thwar Pyi. sinn zarr par Oo. 555ye zayar gyi.
Nov 13, 2014 05:58 AM
That monks fight for women.They are not real monks.They must concern with women.
Nov 01, 2014 10:23 AM